Doorashada USA: Guusha Trump ama Joe Biden maxay uga dhigan tahay dunida? - Caasimada Online
Home Dunida Doorashada USA: Guusha Trump ama Joe Biden maxay uga dhigan tahay dunida?
Doorashada USA: Guusha Trump ama Joe Biden maxay uga dhigan tahay dunida?
Maqaalka uu Thomas Friedman ku qoray wargeyska New York Times asagoo ka walwalsan dimuqraadiyadda dalkiisa ayuu ku yiri, “codayn xor ah iyo xalaal ah, iyo rajada ah in si nabad ah xukunka loo wareejiyo ayaa labadaba su’aal ka taagan tahay.” Madaxweyne Trump ayaa siyaabo kala duwan u sarbeebay in dib loo doorto mooye uusan si sahlan awoodda u wareejin doonin. Taas waxuu micnaheedu yahay in laysla aadi doono maxkamad dibna loo tiri doono codbixinta isu dhowaata ee gobollada qaarkood.
Si kastaba ha ahaate, Maraykan waxaa ka hirgashay dimuqraadiyadda ugu da’da weyn dunida, walow jawiga qaranka ay soo wajahday cabsi dhalin karta rabshado tijaabo gelisa Dimoqraadiyada.